Nkesa - Black Bitcoin
Ndị òtù gụọ
Gbochie Internet Explorer
Laa azụ n'ụlọ
NKỌKWỤKWỌ BỤ NTỤKWỌ NDỊ NA-AHỤRỤ.
90-99.9% nke Bitcoin niile nwere 1% nke ndị ọrụ niile.
90-99.9% nke ego niile dị n'ụwa bụ 1% nke ndị ọrụ niile.
Bitcoin bụ mmelite dị mma na usoro ego na arụmọrụ ma ọ bụghị nanị ókèala. Isi okwu nke ego ego ndị gara aga na-aba ụba na Bitcoin nke bụ ntinye nke akụ na ụba na-adabere na ụdị nkesa na-adịghị mma.
Ọ bụ ezie na ọrụ nkà na ụzụ nke usoro ọrụ cryptocurrency dị ugbu a nwere ike ịbụ oge zuru oke, oge nkesa Bitcoin na mkpụrụ ego ndị ọzọ ("Altcoins") bụ nsogbu. Dị nnọọ ka ọ dị n'usoro ego ego a na-akwụ ụgwọ, onye nwe ya na ịchịkwa 90 +% nke Bitcoin na Altcoins. Altcoins bụ ọnụahịa dabeere na Bitcoin, nke pụtara na ị na-ejide Bitcoin, n'aka nke gị na-achịkwa ọtụtụ akụkụ, ahịa Altcoin na nchịkọta ego na nkwụsị ego. Oge ya iji lekwasị anya na nkesa dị ka usoro iji kpughe ma gbochie ya ịmalite ahịa nke ahịa n'ozuzu ha na ọnụahịa.
Blackcoin Black na-achọ ịbụ ego nke ndị mmadụ, maka ndị mmadụ, site na ndị mmadụ.
A ga-eme nkesa na nchịkọta ọnụ ọgụgụ site ná mmalite, njedebe a nke oke site na ndị ọkachamara na onye ọ bụla nke ego ọ bụla kwesịrị ijide karịa 1% nke oke nkesa niile na ebe ọ bụla (ego mgbochi mkparịta ụka ga-ewepụ ohere nke mbido ejiri ihe eji akpa akpa ma tinye aka n'ezi okwu nke a na-ahụbeghị.
Onu ogugu ga adi n’iru n’iru: 34,028,236,692
Ego ole e kesara: 2,000,000,000
Ntọala Mmalite ~ 2.5% 900 Nde
Ego mmepe ~ 2.5% 900 Nde
Na-ere mbu ~ 2.5% Mkpụrụ ego 900 Million (100 + ndị na-etinye ego ga-abụ ihe mgbakwunye na otu ndị na-enyere aka ịkwaga ọrụ ahụ n'ihu.
Ungwọ ~ 2.5% Onyinye ego 900 maka onyinye bara ụba nke ndị otu na-ere ahịa na obodo Bitcoin Black. Dị ka: ntụgharị nke weebụsaịtị, akwụkwọ akụkọ, ụgwọ ọrụ dashboard na APPS.
Airdrop ~ 10% A ga-etinye mkpụrụ ego ijeri 3.6 na akaụntụ 1 nde (mkpụrụ ego 3600 na akaụntụ ọ bụla)
Ụgwọ Ọrụ onyinye ~ 10% Ego ijeri 3.6 kewara n'etiti 110 Airdrop na-akwụ ndị otu ụgwọ.
Enweghi oke ~ 10% Ego ruru ijeri 3.6.
IEO ~ 20% 7.2 Ijeri ego. A ga-ekenye ego sitere na IEO na ọtụtụ ntọala obodo ga-enyere ndị obodo aka ịkwaga ọrụ ahụ n'ọdịnihu. E kenyere ndị ọkachamara ọkachamara.
Ntughari ego na-eme mkpesa (ihe ruru 5%). Akuku eji eji ego nkwụsi ike iji wepu okwesiri ime mgbanwe nke obere, ma kwadosie ike na ego.
Ntinye nkwupụta ngwa ~ 40% Billion 12.4. Ihe omuma nke ndi mmadu 30 nde mmadu na onu ogugu ndi oru ohuru na-eto eto. Ụzọ iji nweta Bitcoin Black na ụlọ akwụkwọ ọ bụla / mahadum / ebe ọrụ na obodo.
Site na ịmepụta nkesa nke oke nchịkwa, njikwa akaebe ga-eduga na ego enwere ego nke ga-emesị bụrụ ego nke ga-eme n'ezie ma mee atụmatụ ka:
Na-akwụ ụgwọ ụgwọ. Nkwụ ụgwọ ụgwọ. Na-akwụ ụgwọ nri.
N'ikpeazụ, ị ga-egbucha egbugbere ọnụ.
Ịbanye na usoro ego ọhụrụ ahụ nke nwere obere ntụpọ karịa ego mkpuchi ugbu a na usoro ego ego.
Ịghọta mkpa ọ dị ime ka ego ahụ dị irè ma jiri ya rụọ ọrụ n'ahịa zuru ụwa ọnụ nke ga-esochi ike ịme ego maka ọlaọcha anụ ahụ zuru ụwa ọnụ. (ụlọ ahịa n'Ịntanet iji zụta / ire / ahia na mpaghara gị).
Ụgwọ Ụgwọ Ọrụ.
Ihe kachasị elu na-ezo aka na ndị òtù 110 (site na mmalite) gaa na airdrop ghọọ onye na-eme ntọala ma were òkè nke 10% nke gburugburu ebe obibi.
1% nke obodo Bitcoin nwere karịa 90% nke bitcoin niile.
Na 1% nke obodo nke nwere 90 +% nke njikwa bitcoin niile bụ ụfọdụ.
Dị ka ihe niile dabeere na Bitcoins ọnụahịa dị ka ọ bụ isi ahia ụzọ, ọtụtụ ndị ọzọ crypto ego nwere otu mbipụta dị ka bitcoin.
Ihe nkesa ziri ezi bụ ihe Crypto na-enweghị.
Nke a bụ ihe anyị na-achọ imezi & nye aka na mmezi.
Ebumnuche anyị bụ maka nkesa ziri ezi na-ewere ọnọdụ ebe ọ bụ na ọ dịghị ego ọ bụla dịka usoro nke ụwa dị ugbu a.
Ọ bụghị ihe omuma ERC20 ọzọ, Bitcoin Black ga-abụ otu mkpụrụ ego na-eguzosi ike na-adabere na windo oghere nke e wuru n'elu ebe nchekwa iwu nke NANO.
Ihe dị mkpa dị mkpa:
A ghaghị ime nkesa n'oge.
Ọ dị mkpa ka a na-edebe ego maka oge ụfọdụ ka ndị isi obodo wee ghara ire. Ebumnuche ahụ kwesịrị ịbụ ọganihu obodo, ọ bụghị uru dị mkpirikpi dị mkpirikpi.
Obodo ga-ebute 1 nde ndị otu tupu ịmalite ego ahụ ka ha nwee mgbanwe dị elu.
Ọtụtụ mkpuchi anya na-adị nwayọọ nwayọọ na-ekesa site na nhịahụ ma na-achịkwa oge. Ihe akaebe na-egosi nke ọma usoro usoro ntụrụndụ na-esi gbasaa ma tinye uche na pasent ole na ole nke ndị na-ejide ma ọ bụ ndị na-ekere òkè na obodo dị ịtụnanya.
Ndị na-emepụta ntọala nke na-ebugharị ọrụ ahụ ga-enwe ihe na-erughị 5% nke ngụkọta zuru ezu iji hụ na nkesa dị mma na ihe mgbaru ọsọ nke oru (maka nkesa ziri ezi).
A na - ejide fiat niile ma jiri ya rụọ ọrụ.
Crypto bụ ụgbọala zuru oke iji dozie esemokwu a.
Otú ọ dị, ọ bụ nkwenkwe na obere ego site n'elu usoro nke fiaọm na-aga n'ihu abanyela na crypto ma mee ihe niile.
Na May 2017 ahịa okpu ruru ihe ruru 36 ijeri.
Onwa ogugu 21st 2017 di na 628st bu ihe ruru XNUMX ijeri ka ndi mmadu gbara ume ka ha tinye mkpu maka nkwa nke ibu ndi bara ọgaranya.
Nbuli elu na ọnwa 7 bụ ihe na-ekwekọghị n'okike na obere aka nke na-arụ ọrụ n'ịgba ego ahụ.
January 9th ọ kụrụ ihe karịrị 800 ijeri nanị iji daa 260 ijeri na-aga 31st, n'oge a, ndị ọkachamara chịkọtara site na ahia.
Na mpịakọta ndị a, ọ bụghị ndị na-ekwu okwu ego, ọ bụ usoro ahaziri iji chụpụ ọha mmadụ na ego crypto na ndị ọkachamara ka ha nweta oke pasent nke ahịa maka mkpokọta nchịkọta na-enye ha nnukwu aka egwu. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe funahụrụ ha ị nweta karịa nke pasent ahịa ha na-egwuri egwu na ọtụtụ ijeri dollar ma nwekwuo ihe ga-efu karịa ego.
Naanị 0.003% nke ụwa (250,000) na-eme atụmatụ inwe ma ọ dịkarịa ala bitcoin 1.
A na-ejide fiat niile ma jiri ya mee ihe.
Nchekwa bụ ụgbọala zuru oke iji dozie nsogbu nke njikwa; Otú ọ dị, a kwenyere na ọ dịkarịa ala ntakịrị ego site n'aka ọkachamara nke usoro ndị dị na mbụ (ugbu a) na-eme ka ụzọ ha banye cryptocurriences ma malite ịmalite usoro.
Na May nke 2017, ego ahịa nke ahịa bụ ihe dịka ijeri 36. Na Disemba 21, 2017 isi ahịa nke ahịa bụ ihe dịka ijeri 628. A gbara ndị mmadụ ume ịbanye cryptocurriences site na nkwa nke ịba ọgaranya. Nbuli elu na ọnwa 7 bụ ihe na-ekwekọghị n'okike, ọ bụ obere akụkụ nke ndị ahịa niile na-ahụ maka ọrụ ha na-ebufe ego. Na Jenụwarị 9, 2018, isi ahịa nke ahịa karịrị ihe karịrị 800, naanị ka ọ na-adaba na mgbasa ozi nke 260 na March 31, 2018. N'oge a, ndị ọkachamara na-agbakọba cryptocurriences site na ahia. Na mpịakọta ndị a edepụtara, ọ bụghị ego nchịkọta nke gụnyere, kama ọ bụ usoro usoro iji kpochapụ ndị mmadụ site na mkpuchi iji nye ohere maka ndị ọkachamara iji nweta pasent buru ibu nke mbak ahịa (maka mgbakọ ọzọ) na-enye ha otu òkè ka ukwuu nke ahịa maka ịmalite imegharị. Ọbụna ma ọ bụrụ na ndị ahịa ahụ nwere nsogbu site na mgbakọ na ọnụahịa dị elu na ọnụahịa ọnụahịa dị na ahịa, ọ bụ mmeri na n'echiche na ha nwere ike ịchịkwa oke pasent nke ahịa.
Kesaa ya na mmalite, n'enweghi onye otu n'ime obodo iji nweta ihe karịrị 0.5% nke ngụkọta zuru ezu ma tinye ya na-emefu ma dochie usoro, na-eme ka o siere ike ịbanye.
Ntọala mbụ 2.5%
Ego mmepe 2.5%
Ntinye ngosipụta na-akwụ ụgwọ 40%
Ọ bụrụ na ị nwere aro ọ bụla ma ọ bụ nwere mmasị itinye aka na mmepe nke Bitcoin Black ma ọ bụ bụrụ akụkụ nke otu, biko zipụ ozi-e: [email protected]
2020 BITCOIN BLACK